Gam akporo maka PC: otu esi etinye ya, emulators, aghụghọ na ndị ọzọ! | Akụkọ akụrụngwa
Ị chọrọ wụnye gam akporo na kọmputa? Iomi nke sistemụ arụmọrụ abụrụla mgbe ọ ga - abụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma iji lelee ma ọ bụrụ na sistemụ arụmọrụ ma ọ bụ ngwa ya dabara na mkpa anyị, ụtọ ma ọ bụ mmasị anyị. Ọ bụ ezie na nke a abụghị mgbe niile, ebe ọ bụ naanị otu nzube nke arcade emulators ma ọ bụ agadi consoles bụ iji mejuo ncheta oge nwata anyị.
N'ịhapụ mkpa anyị nwere ike ịnwe iji ihe emulator, n'isiokwu a, m ga-elekwasị anya n'igosi gị ihe bụ kacha mma gam akporo emulators maka PC, ụfọdụ emulators nke ga - enyere anyị aka ịnwale ngwa gam akporo ọ bụla na kọmputa anyị, ma ọ bụ iji ya n'ụzọ dị mma na keyboard, dị ka WhatsApp, ma ọ bụ ịchọta nke bụ ngwa kachasị mma dabara na mkpa anyị na-enweghị ijupụta ama anyị. ahihia gam akporo mgbe anyi na anwale ha.
All emulators na m na-egosi gị na a chịkọtara na-emegharị ka anyị nwere ike ka ojiji nke ngwa na egwuregwu site na keyboard na òké site na kọmputa anyị. Ọbụna ụfọdụ na-ekwe ka anyị jiri interface mmetụ nke kọmputa anyị, na-enye anyị ohere igwu egwu dị ka a ga - asị na anyị na - eme ya na mbadamba gam akporo, ọ bụrụhaala na ngwa ma ọ bụ egwuregwu ahụ na - emegharị.
1 Obere PC chọrọ
2 Jiri igwe arụmọrụ
3 Otu esi etinye gam akporo na PC
3.7 Ọtụtụ mmadụ
Obere PC chọrọ
Nke mbụ, buru n'uche nke ahụ ọ bụghị ihe niile emulators nwere otu chọrọ Banyere nkọwa ndị dị mkpa iji wụnye ngwa na PC anyị, anyị ga-eburu nke a n'uche tupu anyị etinye aka na ntinye nke nwere ike iwe ogologo oge karịa kọmputa ochie wee nwee mmekọrịta na nsụgharị gam akporo. Arụnyere bụ nwayọ nwayọ na anyị enweghị ike ịmekọrịta jiri ya.
Ọ bụrụ n ’ị zụta kọmputa ahụ obere oge, o yikarịrị ka ọ nwere 4 GB nke RAM yana onye nhazi dị ike iji megharịa kpam kpam emulator ọ bụla m gosiri gị n’isiokwu a.
Ọ bụrụ, n'aka nke ọzọ, ị na-eme atụmatụ ịwụnye ya na kọmputa ochie ị na-edina, ị ga-eburu n'uche na emulator na-arụ ọrụ nke ọma, chọrọ 1 GB opekempe, ka mma 2 ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume. Banyere processor, ọsọ ọ na-arụ ọrụ ọfụma bụ 1,2 Ghz. Oghere chọrọ iji wụnye nke ọ bụla n'ime ndị a emulators bụ ezigbo gafere, ọbụlagodi chọrọ ohere 25 GB.
Ihe ngosi nke kọmputa anyị adịghị mkpa, ebe ọ bụ na interface ihe osise na-akpali ekele nke etinyere n'ime kọmputa anyị na elu ọsọ nke ya, arụmọrụ nke emulator ga-adị elu.
Jiri igwe arụmọrụ
Ọtụtụ n'ime ndị emulators anyị na-egosi gị n'isiokwu a, chọrọ nrụnye na draịvụ ike wezụga, ihe ọtụtụ ndị ọrụ enweghị na PC ha. Ọ gwụla ma naanị ihe anyị chọrọ inye kọmputa ebe anyị ga-etinye ya, ihe kachasị mma anyị nwere ike ime bụ iji njikwa igwe arụmọrụ dị ka VMWare ma ọ bụ VirtualBox, n'ụzọ dị otú a, mgbe ike gwụrụ anyị na ụdị ahụ, anyị nwere ike ihichapụ ya ozugbo na-enweghị emetụta arụmọrụ nke kọmputa anyị.
Mana kwa, ọ bụ ezigbo ihe ngwọta ma ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ mgbe niile dị iche iche gam akporo emulators na aka arụnyere na PC anyị iji wee rite uru zuru oke nke ọrụ ndị a na-enye nke ọ bụla, ebe ọ bụ na ọ na-adị na mbụ, ihe ụfọdụ ndị ọzọ enweghị na ntụgharị.
Otu esi etinye gam akporo na PC
Na-adịbeghị anya, otu n'ime ihe ngwọta na arụmọrụ ka mma na nhọrọ ọ na-enye anyị mgbe anyị na-e Androidomi gam akporo na PC anyị ọ bụ BlueStacks. N'ezie, ọ bụrụ na ị nwere kọmputa ochie, anaghị m akwado ka ị gbalịa ịwụnye ya, ọ bụghị naanị n'ihi oge nke usoro ahụ na-ewe, mana n'ihi na ọrụ nke emulator na-ahapụ ọtụtụ ihe ịchọrọ. Ihe ndị a chọrọ na emulator a na-enye anyị na-akpali site na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nhọrọ ọ na-enye mgbe ọ bịara inweta ọtụtụ ihe na gam akporo.
BlueStacks bụ otu n'ime emulators ole na ole jikọtara Ọrụ Google Play, nke mere na anyị nwere ike ịmekọrịta data nke akaụntụ nke ama anyị na emulator ma nwee ike ịnweta ngwa niile anyị zụtara na njedebe gam akporo anyị ozugbo. Na mgbakwunye, ọ dakọtara na interface mmetụ aka ka anyị wee nwee ike iji ngwa ma ọ bụ egwuregwu na-emekọrịta ozugbo na ihuenyo PC anyị, kama iji keyboard na / ma ọ bụ òké.
Ikekwe, AndyOS bụ otu n'ime ngwọta kachasị mma anyị nwere ike ịchọta ịnụ ụtọ ma ọ bụ rụọ ọrụ kwa ụbọchị na gam akporo site na PC anyị, ebe ọ bụ nke na-enye anyị ahụmịhe kachasị mma na zuru okè mwekota emegharị ka anyị PC. 100% dakọtara na Google Play ka anyị wee nwee ọ withoutụ na enweghị nsogbu na nnweta nke ọ na-enye anyị na ngwa ngwa ngwa Google wee nwaa egwuregwu na ngwa niile anyị chọrọ otu.
Ọ bụrụ na anyị achọghị ime ka ndụ anyị sie ike site na iji igwe mebere ihe, Gemymotion na-akpaghị aka na-emepụta igwe arụmọrụ zuru oke iji wụnye ma emesịa na gam akporo, ọ dakọtara na PC na Linux na Mac. Ọzọkwa, ọ dakọtara na igwefoto kọmputa anyị, yabụ anyị ga-enwe ike iji ya dị ka a ga - asị na ọ bụ n'ezie ama gam akporo ama ma ọ bụ mbadamba.
RemixOS kụrụ ahịa dị ka ngọzi maka ndị ọrụ ahụ niile na-achọ ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe ịnụ ụtọ egwuregwu ha ma ọ bụ ngwa ha na PC. O bu ihe nwute, dika o ruru ahia, o rapuru, na ndi mmepe choro ihapu oru ngo a iji rara onwe ha nye oru ndi ozo bara uru karia ebe obu na nsogbu nke mbido nke gam akporo PC a nwere, obu kpamkpam enwere onwe ya ikuku, nke m ma, ọ dịghị onye dị ndụ.
RemixOS na Android 6.0 na - aru ​​oru, ibu otu n’ime anyi awade dị otú ahụ a na-adịbeghị anya gam akporo version for free ọ bụkwa otu n'ime nhọrọ kachasị mma ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iji ya egwu. N'ịbụ ndị nweere onwe anyị, anyị nwere ike ịchọta ya n'ọtụtụ ọnụ ọgụgụ ibe weebụ ma ọ bụ saịtị nbudata n'agbanyeghị na ọ dịkwaghị site na weebụsaịtị onye nrụpụta. RemixOS na-enye anyị ohere ịhazi ọnụọgụ nhọrọ dị ukwuu iji hazie nsụgharị gam akporo na mkpa anyị na ụtọ anyị, mana ọ nwere naanị otu mmachi na nke ahụ bụ na ọ dakọghị na ndị ọrụ AMD.
Ọ bụrụ na mgbakwunye na ịnụ ụtọ egwuregwu gam akporo ma ọ bụ ngwa na PC gị, ịchọrọ ihuenyo ndekọ, KoPlayer nwere ike ịbụ ngwa nke kachasị mma maka mkpa gị. Site n'inweta ihe ziri ezi, KoPlayer bụ ezigbo ihe ọzọ iji dekọọ vidiyo nke egwuregwu, ngwa ma ọ bụ naanị iji gbaa ngwa ọ bụla achọtara naanị n'ime usoro okike Google, gam akporo.
Ekele maka ndọtị a maka Chrome anyị nwere ike ịnụ ụtọ ngwa ndị dị na Google Play na-enweghị iji akụkụ buru ibu nke draịvụ ike anyị nwere emulator zuru ezu chọrọ ngwaọrụ dị ike adịchaghị mma. N'ịbụ onye emulator Android, ihe Google anaghị enwe mmasị nke ukwuu, ndọtị a adịghị na Chromelọ Ahịa Google Chrome, yabụ anyị ga-aga GitHub iji budata ya wee nwee ọ itụ na ya.
Manymo anaghị arụ ọrụ dị ka ndọtị ma fọrọ nke nta, ebe ọ bụ ihe gam akporo emulator na weebụ ya mere mgbe ụfọdụ ọ nwere ike ịrụ ọrụ obughi dika anyi choro tumadi mgbe ị na-agba ụfọdụ ngwa ma ọ bụ egwuregwu, mana ọ na-enye anyị ohere ịghara ịwụnye sọftụwia ọ bụla na kọmputa anyị ma ọ bụrụ naanị na anyị chọrọ iulateomi gam akporo iji nwalee otu ngwa.
Memu na-enye anyị ihe zuru ezu Android 5.1 emulator nke dakọtara na Intel ma ọ bụ AMD processors. Site na nchịkọta nhọrọ, nke dị n'otu akụkụ, anyị nwere ike ịhazi ma ọrụ nke òké na kiiboodu ka o wee kwekọọ na mkpa anyị ma mgbe anyị na-egwu egwu ma mgbe anyị na-arụ ọrụ.
N'isiokwu a anyị gbalịrị ichikota nhọrọ maka ihe masịrị na mkpa niile, site na nsụgharị zuru ezu nke wụnye ma rụọ ọrụ n'adabereghị, site na ndọtị ma ọ bụ Vis web emulators iji kwụsị emulators na ụdị ngwa. Ugbu a, ị ga-ahụ ihe ndị Nhọrọ kachasị mma maka mkpa gị.
Ọ bụrụ na ebumnuche ịchọrọ ịnye gam akporo na PC gị abụghị igwu egwu, mana ị chọrọ iji Instagram, WhatsApp na obere ihe Nox bụ otu n’ime azịza kachasị mfe ma dị mfe na anyị nwere ike ịchọta n'ahịa. Ọ na-enye anyị ohere ịnweta Google Play ka anyị wee nwee ike iji nsụgharị a nwalee ngwa ahụ tupu ịwụnye ha na ama anyị, iji zere ijupụta na mkpofu nke ngwa ndị ahụ hapụrụ ka anyị na-ehichapụ ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » A gam akporo maka PC